औंषधीय गुणले भरिपूर्ण पुदिनाका अनेक फाइदा – eRoyaltimes
उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सुरु, राजपा सबै निर्वाचनमा सहभागी हुने
धर्मनिरपेक्षताको नाममा हिन्दूमाथि आक्रमण
बजारमा भेटिए ३ लाखसम्मका साइकल
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन १० दिन बित्न नपाउँदै सिँचाइको जम्बो टोली इटाली भ्रमणमा
उपत्यकामा भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा अत्यधिक विषादी
येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सव डिसेम्बर २५, आज क्रिसमस मनाईदै
छक्का पन्जा–२ प्रदर्शनको विवाद सुल्झियो, दसैंमा प्रदर्शनी
फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा मलेसियाका १८४ कम्पनीको माग
औंषधीय गुणले भरिपूर्ण पुदिनाका अनेक फाइदा
तपाइँकाे करेसाबारी, गमला वा छत जता पनि लगाउने औंषधीय गुणले भरिपूर्ण पुदिनाका बारेमा तपाइँलाई थाहा नै छ । तर यसले शरीरमा कस्ताे फाइदा दिन्छ भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ । संसारभर नै पुदिनालाई अचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । पुदिना अचारमा मात्र सीमित हुने वनस्पति होइन । यसलाई चिया, टुथपेस्ट, चुइगम, माउथ स्प्रेलगायतमा पनि प्रयोग गरिन्छ । पुदिनामा औषधीय गुण हुने भएकाले नियमित प्रयोग गर्दा अनेक फाइदा हुन्छ ।
पुदिनाका फाइदा यसप्रकार रहेका छन्ः–
-पुदिनाले दाँत र मुखलाई पनि स्वस्थ राख्ने काम गर्छ । यसले साससमेत ताजा बनाउँछ । यसका साथै पुदिनाले शरीरमा रोगप्रतिरोधी क्षमतासमेत बलियो बनाउन भूमिका खेल्छ । पुदिनाले मुखमा उत्पादन हुने खराब ब्याक्टेरियाको विकासलाई रोक्ने काम गर्छ, जसले गर्दा दाँत र जिब्रोलाई स्वस्थ राख्नुका साथै सफा पनि गर्छ ।
-पुदिनाले क्यान्सरजस्तो रोगबाट बचाउन सहयोगी काम गर्छ । किनकि, यसमा क्यान्सरसँग लड्ने इन्जाइम हुन्छ ।
-पुदिनाले रगतलाई सफा गर्ने काम पनि गर्छ । यसका साथै शरीरको शान्त मांसपेशीमा एन्टिस्मास्मोडिक इफेक्ट पार्छ । जसका कारण महिलाको महिनावारीमा हुने दुखाइलाई समेत कम गर्छ ।
-पुदिना खाएमा यसले पाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका निर्वाह गर्छ । पेटमा कुनै प्रकारको समस्या देखिएमा पनि पुदिनाको चिया बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ । यसले मुखको लारा ग्रन्थिलाई सक्रिय बनाउँछ । लारा ग्रन्थिले पाचन इन्जाइम निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
-कलेजोले बिस्तारै–बिस्तारै राम्रोसँग काम गर्न छाडेको छ भने पनि पुदिनाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसले कलेजोसम्बन्धी कैयौँ समस्याबाट मुक्त बनाउँछ ।
-एक अनुसन्धानअनुसार पुदिनाको प्रयोगले मस्तिष्कलाई पनि फाइदा पु-याउँछ । पुदिनाले मस्तिष्कको कामलाई सक्रिय बनाउनुका साथै धारणशक्तिलाई पनि बलियो बनाउँछ । यसले सम्झन सक्ने क्षमतालाई पनि बढाउँछ ।
-पुदिनाले तौल घटाउन पनि भूमिका खेल्छ । पुदिनाले फरक–फरक प्रकारका पाचन इन्जाइम उत्पादन गर्न प्रेरित गर्छ । र, हामीले खाएका खानाबाट त्यस्ता इन्जाइमको उत्पादन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शरीरले बोसो एकत्रित गरी ऊर्जामा परिवर्तन गर्छ ।
-पुदिनाको चिया बनाएर पिउँदा तनावबाट पनि टाढा रहन सकिन्छ । यसले मांसपेशी र जोर्नीको दुखाइमा समेत राहत प्रदान गर्छ ।
यौन क्षमतामा अदुवाले गर्छ सहयोग !
एजेन्सी । हाम्रो खानपानले हाम्रो यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यमा सहयोग र असर दुवै गरिरहेका हुन्छन् । केही खानेकुराले हाम्रो प्रजनन् स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर गरिरहेका हुन्छन् भने केहीले फाइदा गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो एक अध्ययनले अदुवाले महिलाको प्रजनन् क्षमता बलियो बनाएको र यौन क्षमतामासमेत सहयोग गरिरहेको पाइएको छ । अदुवामा एन्टि-एन्फ्लेमेट्री तत्व […]
मनुष्य आफ्नो न्यूनतम प्राकृतिक उर्जा–गतिमा चलिरहेछ । -पथिक वावा
तुलसीको पात र सिदेनून कागतीको रसमा पिनेर लगाउने गरे विस्तारै चायाँ हराउँदै जान्छ । — डा. पथिक
रोगसम्बन्धी जानकारी स्वास्थ्यको दिशा प्राकृतिक नियम